136s Andrew Cuomo enweghị atụ a ma ama n’etiti ọrịa na-efe efe na-efe efe images and subtitles
-Onye isi ochichi New York Andrew Cuomo apụtawo dịka otu n’ime ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị elu n'etiti ntiwapụ nke Coronavirus. -Ma anyị ka na-aga ije. -Aghasa ọrịa ngwa ngwa gbasaa na United States agbanweela ndụ ndị America kwa ụbọchị. N'elu ọnọdụ dịlarị nsogbu na nsogbu bụ ozi agbakwunyere nke ozi agwakọta nke ọchịchị. -E lere anya n'ihe ọghọm ụgbọala, nke dị elu karịa ọnụọgụ ọ bụla anyị na-ekwu. Nke a apụtaghị na anyị ga-agwa mmadụ niile, "Achọghịzi ịnya ụgbọ ala." - Mana Cuomo agbaala mbọ ka o doo anya na nkọwa ya ụbọchị niile. New York enwekwuputara ikpe banyere coronavirus karịa steeti ọ bụla ọzọ. Mmelite Cuomo gosipụtara n'ụzọ doro anya mkpa steeti ya. - Ndị na - arụ ọrụ ikuku, ndị na - eku ume. Anyị chọrọ 30,000. -Mgbe onye ochichi n’onwe ya nwara ime ka ụjọ jidere. -Ama m hụ ka ndị New York na-aza. Enwere m ike ịhụ otú ndị New York si emeso ibe ha. Ahụrụ m ndị ọrụ afọ ofufo 6,000 ahụike uche. Ahụrụ m ndị ọrụ ahụike 40,000 ka ha na-agbago. Ahụrụ m ndị na-ere ahịa na-akpọ m, na-asị, "Enwere m ike inye aka." Nke ahụ bụ New York. Nke ahụ bụ New York. -Akpata ya, mkpirisi ahụ abụrụla nlere maka ndị New York na ndị ọzọ. Cuomo abụwo onye eziokwu ya na echiche ya banyere ochichi Trump. Na mbido nsogbu ahụ, Cuomo na Trump bidoro na-atọ ụtọ idopụ iche. - Mana mụ na onye isi ala ahụ kwetara ụnyaahụ, lee, anyị na-alụ otu agha, nke a bụ agha. - kama ka onodu a kari, azu ha na azu wee kpoo ọkụ karị. - want chọrọ kutu aka na azụ maka izipu 400 ventilashị? Kedu ihe anyị ga-eme maka ndị na-ekuru ikuku 400 mgbe anyị chọrọ ikuku ventila mmadụ 30,000. - Mana, ị mara, ọ bụrụ na iche maka Gọvanọ Cuomo, Anyị na-ewu ya ụlọ ọgwụ anọ. Anyị na-ewu ya ụlọọgwụ anọ na-ahụ maka ahụike. Anyị na-arụ ọrụ ike, na-arụsi ọrụ ike maka ndị New York. Anyị so ya na-arụ ọrụ, m wee lelee ya na ihe nkiri na-eme mkpesa. -Ọ ga-eche na ọ bụrụ na Trump abịa n'oge nkọwa nke Cuomo ma ọ bụ na ọ bụghị, mmelite a kwa ụbọchị nke gọvanọ abụrụla obere maka ndị New York na-achọ nduzi na nkasi obi. -Anyị ga-eme ya n'ihi na m hụrụ New York n'anya, m hụkwara New York n'anya n'ihi na New York hụrụ gị n'anya.
Andrew Cuomo enweghị atụ a ma ama n’etiti ọrịa na-efe efe na-efe efe
< start="0.12" dur="1.92"> -Onye isi ochichi New York Andrew Cuomo apụtawo >
< start="2.04" dur="2.2"> dịka otu n’ime ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị elu >
< start="4.24" dur="1.79"> n'etiti ntiwapụ nke Coronavirus. >
< start="6.03" dur="2.4"> -Ma anyị ka na-aga ije. >
< start="8.43" dur="2.14"> -Aghasa ọrịa ngwa ngwa gbasaa na United States >
< start="10.57" dur="2.07"> agbanweela ndụ ndị America kwa ụbọchị. >
< start="12.64" dur="3.03"> N'elu ọnọdụ dịlarị nsogbu na nsogbu >
< start="15.67" dur="2.43"> bụ ozi agbakwunyere nke ozi agwakọta nke ọchịchị. >
< start="18.1" dur="2.7"> -E lere anya n'ihe ọghọm ụgbọala, >
< start="20.8" dur="2.97"> nke dị elu karịa ọnụọgụ ọ bụla anyị na-ekwu. >
< start="23.77" dur="2.26"> Nke a apụtaghị na anyị ga-agwa mmadụ niile, >
< start="26.03" dur="1.35"> "Achọghịzi ịnya ụgbọ ala." >
< start="27.38" dur="2.14"> - Mana Cuomo agbaala mbọ ka o doo anya >
< start="29.52" dur="1.31"> na nkọwa ya ụbọchị niile. >
< start="30.83" dur="2.58"> New York enwekwuputara ikpe banyere coronavirus >
< start="33.41" dur="1.43"> karịa steeti ọ bụla ọzọ. >
< start="34.84" dur="3.09"> Mmelite Cuomo gosipụtara n'ụzọ doro anya mkpa steeti ya. >
< start="37.93" dur="3.59"> - Ndị na - arụ ọrụ ikuku, ndị na - eku ume. >
< start="41.52" dur="1.38"> Anyị chọrọ 30,000. >
< start="42.9" dur="1.9"> -Mgbe onye ochichi n’onwe ya nwara >
< start="44.8" dur="1.35"> ime ka ụjọ jidere. >
< start="46.15" dur="3.22"> -Ama m hụ ka ndị New York na-aza. >
< start="49.37" dur="3.37"> Enwere m ike ịhụ otú ndị New York si emeso ibe ha. >
< start="52.74" dur="2.67"> Ahụrụ m ndị ọrụ afọ ofufo 6,000 ahụike uche. >
< start="55.41" dur="4.1"> Ahụrụ m ndị ọrụ ahụike 40,000 ka ha na-agbago. >
< start="59.51" dur="3.48"> Ahụrụ m ndị na-ere ahịa na-akpọ m, na-asị, "Enwere m ike inye aka." >
< start="62.99" dur="2.83"> Nke ahụ bụ New York. Nke ahụ bụ New York. >
< start="65.82" dur="2.45"> -Akpata ya, mkpirisi ahụ abụrụla nlere >
< start="68.27" dur="1.48"> maka ndị New York na ndị ọzọ. >
< start="69.75" dur="1.81"> Cuomo abụwo onye eziokwu >
< start="71.56" dur="1.77"> ya na echiche ya banyere ochichi Trump. >
< start="73.33" dur="2.54"> Na mbido nsogbu ahụ, Cuomo na Trump bidoro >
< start="75.87" dur="2.22"> na-atọ ụtọ idopụ iche. >
< start="78.09" dur="2.36"> - Mana mụ na onye isi ala ahụ kwetara ụnyaahụ, lee, >
< start="80.45" dur="3.83"> anyị na-alụ otu agha, nke a bụ agha. >
< start="84.28" dur="2.48"> - kama ka onodu a kari, azu ha na azu >
< start="86.76" dur="1.57"> wee kpoo ọkụ karị. >
< start="88.33" dur="3.39"> - want chọrọ kutu aka na azụ maka izipu 400 ventilashị? >
< start="91.72" dur="2.76"> Kedu ihe anyị ga-eme maka ndị na-ekuru ikuku 400 >
< start="94.48" dur="3.03"> mgbe anyị chọrọ ikuku ventila mmadụ 30,000. >
< start="97.51" dur="2.64"> - Mana, ị mara, ọ bụrụ na iche maka Gọvanọ Cuomo, >
< start="100.15" dur="1.88"> Anyị na-ewu ya ụlọ ọgwụ anọ. >
< start="102.03" dur="2.09"> Anyị na-ewu ya ụlọọgwụ anọ na-ahụ maka ahụike. >
< start="104.12" dur="3.92"> Anyị na-arụ ọrụ ike, na-arụsi ọrụ ike maka ndị New York. >
< start="108.04" dur="0.98"> Anyị so ya na-arụ ọrụ, >
< start="109.02" dur="2.19"> m wee lelee ya na ihe nkiri na-eme mkpesa. >
< start="111.21" dur="2.92"> -Ọ ga-eche na ọ bụrụ na Trump abịa n'oge nkọwa nke Cuomo ma ọ bụ na ọ bụghị, >
< start="114.13" dur="2.4"> mmelite a kwa ụbọchị nke gọvanọ abụrụla obere >
< start="116.53" dur="2.72"> maka ndị New York na-achọ nduzi na nkasi obi. >
< start="119.25" dur="5.17"> -Anyị ga-eme ya n'ihi na m hụrụ New York n'anya, >
< start="124.42" dur="4.58"> m hụkwara New York n'anya n'ihi na New York hụrụ gị n'anya. >